12. Āsevana Paccaya | Dhamma Training Center
ပဋ္ဌာန်းတရားတော်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ်ဘ၀ Daily Life Patthana ၁၂ – အာသေ၀နပစ္စယော Āsevana Paccayo (Repetative condition) PDF File
ပဋ္ဌာန်းတရားတော်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ်ဘ၀ Daily Life Patthana ၁၂ – အာသေ၀နပစ္စယော Āsevana Paccayo (Repetative condition)...
Nov 28 th, 2019
၁၂– အာသေ၀နပစ္စယော PDF file ( Āsevana Paccayo – Repetitive condition)
၁၂– အာသေ၀နပစ္စယော Āsevana Paccayo (Repetitive condition) PDF ile...
Nov 24 th, 2019
၁၂– အာသေ၀နပစ္စယော Āsevana Paccayo (Repetitive condition) Roman Pali and English (1 of 10) Āsevanapaccayo Paccayaniddeso Āsevanapaccayoti – purimā purimā kusalā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ...
၁၂- အာသေ၀နပစ္စယော Āsevana Paccayo (Repetitive condition) (2 of 10)
၁၂– အာသေ၀နပစ္စယော Āsevana Paccayo (Repetitive condition) (2 of 10) (ပါဠိ၊ မြန်မာပြန်) zawgyi ၄၂၆။ ကုသလော ဓမ္မော ကုသလဿ ဓမ္မဿ အာသေ၀နပစ္စယေန ပစ္စယော။ (ကု၊ ကု-၁) ကုသိုလ်တရားသည်...
၁၂- အာသေ၀နပစ္စယော Āsevana Paccayo (Repetitive condition) (3 of 10) Doing something again and again. (က-၁) အာ = အထပ်ထပ်အခါခါ သေ၀န= ထုံမွမ်းသည်၊ ပွားများသည်။ ဇောတစ်ခုက ထိုဇောမျိုး ထပ်ခါထပ်ခါ...
၁၂- အာသေ၀နပစ္စယော Āsevana Paccayo (Repetitive condition) (4 of 10) zawgyi ကျွန်မလေးမပြည့် သူမနာမည်က ပုဏ္ဏာ။ အနာထပိဏ်သူဌေးအိမ်မှာ ၁၀၀ ပြည့်မြောက်တဲ့ ကျွန်မလေးပါ။ ကျွန်တစ်ရာ ပြည့်လို့ သူ့ကို လွယ်လွယ်ပဲ နာမည်ပေးလိုက်တယ် ပုဏ္ဏာလို့။...
Nov 23 rd, 2019
၁၂- အာသေ၀နပစ္စယော Āsevana Paccayo (Repetitive condition) (5 of 10) zawgyi ဇောဟူသည် – (ခ-၁) ကုသိုလ်၊ အကုသိုလ်တို့ အားကြီးလာမှုက အဖန်တလဲလဲ အထုံရသည့် အာသေ၀န၏ သတ္တိပေတည်း။ ထို့ကြောင့် အာသေ၀န ကျေးဇူးပြုရာတွင် မျိုးဇာတ်တူရပါသည်။ ...
၁၂- အာသေ၀နပစ္စယော Āsevana Paccayo (Repetitive condition) (6 of 10)
၁၂- အာသေ၀နပစ္စယော Āsevana Paccayo (Repetitive condition) (6 of 10) zawgyi စူဠဧကသာဋက ဗြာဟ္မဏ၀တ္ထု မြတ်စွာဘုရားရှင် ဇေတ၀န်ကျောင်းတော်၌ သီတင်းသုံးတော်မူစဉ် အခါကာလက ပုဏ္ဏားလင်မယား နှစ်ဦးပေါင်းမှ အပေါ်ဝတ်ရုံ တစ်ထည်တည်းသာ ရှိလေသည်။ ထို့ကြောင့် သာသနာ့မှတ်တမ်းတွင် ၄င်းပုဏ္ဏားကို...
၁၂- အာသေ၀နပစ္စယော Āsevana Paccayo (Repetitive condition) (7 of 10)
၁၂- အာသေ၀နပစ္စယော Āsevana Paccayo (Repetitive condition) (7 of 10) zawgyi ဇောခုနှစ်ကြိမ်တွင် အဘယ်ဇောအားကြီးဆုံးဖြစ်သနည်း ? (ဂ- ၁) ဇောကမူ ကုသိုလ်၊ အကုသိုလ် စွမ်းရည် သတ္တိများရှိသည်။ ဤတွင် သတိပြုရမည်မှာ ကုသိုလ်ဇောက ကုသိုလ်ဇောကိုသာ...
၁၂- အာသေ၀နပစ္စယော Āsevana Paccayo (Repetitive condition) (8 of 10) zawgyi ပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းများကိုယှဉ်တွဲလေ့လာခြင်း (ဃ-၁ ) အနန္တရပစ္စည်းသည် မျိုးဇာတ်တူသည် ဖြစ်စေ၊ မတူသည် ဖြစ်စေ ကျေးဇူးပြုသည်၊ ဥပမာ -ကု ဗျာ၊ အကု ဗျာ၊ ဗျာ...
၁၂- အာသေ၀နပစ္စယော Āsevana Paccayo (Repetitive condition) (9 of 10)
၁၂– အာသေ၀နပစ္စယော Āsevana Paccayo (Repetitive condition) (9 of 10) zawgyi Neither Kusala nor Kusala nor result of Kamma (င-၁) အာသေ၀နပစ္စည်းက ရုပ်တရားများ မပါပေ။ အကြောင်းလည်း နာမ်တရားဖြစ်ပြီး၊...
၁၂- အာသေ၀နပစ္စယော Āsevana Paccayo ( Repetitive condition) (10 of 10)
၁၂- အာသေ၀နပစ္စယော Āsevana Paccayo (Repetitive condition) (10 of 10) zawgyi ကံနှင့်ကိလေသာ (စ- ၁) ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဒေသနာတွင် အ၀ိဇ္ဇာပစ္စယာ သင်္ခါရ။ သင်္ခါရပစ္စယာ ၀ိညာဏံ။ အ၀ိဇ္ဇာဟူသည် မောဟကိလေသာ။ သင်္ခါရမည်သည် ကံ ။ ထို့ကြောင့်...